SNAPCHAT's Nhau Yekuongorora Inokupa Mamwe Maonero Ekuona | IPhone nhau
Imwe yeanonyanya kufarirwa "mameseji" mashandisiro enguva iyi SNAPCHAT uye yazivisa mukati meiyi masikati / manheru ficha nyowani iyo iwe yaunowedzera kune yako application inonzi Nyaya Yekuongorora. Iri basa nyowani rinotibvumidza isu kuziva izvo zvakawedzera ruzivo kuseri kwega kwega SNAPCHAT nyaya, zita diki kana kuwedzerwa chirevo chinotipa mukana wekunzwisisa zvirinani iyo nguva yatapwa, fusion chaiyo pakati pezvakanyorwa nezvakanyorwa, ku kukwanisa kududzira Zviri nani chimwe nechimwe chinhu uye nenzira kwayo kugadzirisa zvinhu zvese zvatiri kuona, Nhau Yekuongorora inotibatsira nemapoinzi akasiyana eichi chiitiko chimwe chete.
Nebasa idzva iri isu tichakwanisa kusangana nemamiriro ezvinhu akafanana kubva kwakasiyana maonero, kunzwa sekunge iwe uripo ipapo. Kuti unzwisise zvirinani kuti zvinoshanda sei, iyo SNAPCHAT timu yekusimudzira yagadzira vhidhiyo inotsanangudza iyo ini ndinokuraira iwe kuti utarise, nekuti rimwe nerimwe basa nyowani rekushandisa rinogona kuve rakaomarara kwatiri kufunga, nevhidhiyo iyi uchainzwisisa nenzira inokurumidza uye zviri nyore zvinogoneka:
Iyi ficha ichaenda kunogara kune veNew Yorkers neLos Angeles vagari nhasi nenzira yekuzivisa, asi ichaenderera nekukurumidza. Sezvatove tatsanangura, chikuru chinangwa cheNhau Yekuongorora ndeye ipa mukana wekuve nepfungwa dzakasiyana dzechiitiko chimwe chete. Makomputa mazhinji ari pamusoro pekuongorora mifananidzo kuti awane ichi chinoshamisa mhedzisiro, zvirinani kuti Evan Spiegel (CEO weSNAPCHAT) akatsanangura sei kune pepanhau muLos Angeles. Iyi sevhisi yekutumira mameseji haimisi kufambira mberi nekuvandudza, zvakasiyana nevamwe zvakanyanya kumira, pamwe ndicho chinhu chakakosha nei SNAPCHAT ichiva chishandiso chakanakisa icho chatova chikamu chemamwe marongedzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » SNAPCHAT's Nhau Yekuongorora inokupa mamwe mapoinzi ekuona
WhatsApp inobvumidza kunyararidza zvakajairika zveboka